Wax ka baro taariikhda Libaaxii Saxaraha Caalim Diineed - Awdinle Online
Wax ka baro taariikhda Libaaxii Saxaraha Caalim Diineed
January 14, 2020 (Awdinle Online) –Magaca Libaaxii Saxaraha ayuu taariikhda ku galay. Caalim diineed, dagaalyahan iyo hoggaamiye hal-adag oo aan mabdi’iisa ka gorgortamin ayuu ahaa. Dagaal kudhufo oo kadhaqaaq ah ayuu halgan adag kula galay, hurdadana ugu diiday gumeystihii Talyaaniga ee dalkiisa ku soo duulay. Waa Shiikh Cumar Al-Mukhtaar, Alle ha u naxariistee. August 5, 1861 ayuu ku dhashay magaala xeebeedka Zanzur ee dalka Liibiya. Agoonnimo iyo duruuf adag ayuuna ku soo koray.
Isaga oo macallin dugsi ah oo Quraanka dadka baro ayaa gumeystihii Talyaanigu ku soo duulay Liibiya 1911-kii. Cumar Al-Mukhtaar iyo jabhaddiisii waxay hubka u qaateen in ay jihaad la galaan Talyaaniga oo xasuuq ba’an ku hayay maatada iyo haweenka Liibiya. Cumar waxa uu aad u garanayay juquraafiga dalkiisa, waxa uuna ciidan dhigay goobaha istiraatiijiga ah.
Ciidan yar iyo cudud liidata ayuu kula dagaallamay gumeystaha oo ku hubeysnaa gantaallo casri ah. Dhulka saxaraha iyo buuraha oo marriin u ahaa gumeystaha ayuu dagaal ku-dhufo-oo-ka-dhaqaaq ah kula halgamay Talyaaniga oo isku fidinayay Liibiya, waxa uuna halgankaas ku jiray in ka badan 20 sano, waxaana Talyaaniga ku adkaatay in uu isku fidiyo Liibiya.
Waxayse ugu dambeyn ugu yeereen wada-hadal, una soo bandhigeen in ay siinayaan guri qurux badan iyo lacag qancisa taasi badalkeedana ay isaga iyo jabhadiisa isi-soo dhiibaan. Waxa uuse ugu jawaabay in uusan dalkiisa marnaba laaluush yar ku badalan doonin, dagaalna uusan ka joojin doonin ilaa gumeystayaasha ay dalkiisa uga baxaan. Waxa uuna Cumar sii laba jibaaray dagaalkii halkaas oo ay gumaystihii Talyaaniga kala kulmeen halaag badan.
1931-kii waxaa dhamaad yimid halgankii dheeraa ee Shiikha markii uu ku dhaawacmay dagaal culus kadibna ay qabteen ciidamadii Talyaaniga, seddex maalin oo xarig ah kadib waxa ay soo taageen tiir ku yaala meel fagaaro ah halkaas oo ay ku daldaleen isaga oo 73 jir ah.
Inta aysan daldalin kahor waxa ay Shiikha weydiiyeen ilaa goorta ay qaadaneyso in ay jabhadiisa isi-soo dhiibaan, waxa uuna ku jawaabay:-
“Isma dhiibeyno, waan guuleysanaa ama waan geeriyoonaa. Haddii aan geeriyoono waxaa idinla dagaalami doona jiilalka naga dambeeya iyo kuwa kasii dambeeya. Anigana waxa aan noolaan doonaa waqti ka dheer waqtiga kan i daldalaya”!
Riyadii Cumar Al-Mukhtar Allah u naxariistee ee aheed in uu noolaado geeridiisa kadib waa ay rumowday oo waxa ay taariikhdu magiciisa ku xarriiqday baal dahabi ah, waxa uu maanta ka magac dheeryahay kii daldalay, waxaana taariikhdiisa laga qoray buugaag badan, 1981-kii oo ku beegneed 50 sano guuradii geeridiisana waxaa uu Mustafa Al-Caqaad sameeyay filinka ‘Lion of the Dessert” – Libaaxii Saxaraha – oo ka hadlaya halgankii Shiikha, waxaana ku baxday sameynta filimkaas 35 milyan oo dollar.
Sanadkii 1961 waxaa dalka Liibiya laga furay jaamacad Cumar Al-Mukhtar loogu magac-daray, waxaa sidoo kale magiciisa loogu wanqalay waddooyin ku yaala Kuweyt, Sacuudiga, Masar, Maroooko, Qadar, Jordan iyo Tuunis, iyo labo masjid oo ku yaala magaalada Tampa ee dalka Mareykanka iyo magaalada Benghazi ee dalka Liibiya, sanad kastena waxaa caalamka lagu dhigaa munaasabado lagu xusayo halgankiisii iyo haladeyggiisii.
Nin adag ayuu ahaa Cumar Al-Mukhtar, Eebbe ha u raxmado’e.
Qore: Bahja Ali Shuriye
Previous articleWho’s Oman’s New Sultan Haitham bin Tariq?
Next articleFaafahin qaraxii ka dhacay duleedka Muqdisho